भारती र लक्ष्मणलाई गोर्खालीगको कठोर चेताउनी: पार्टीको नाम र झण्डा चलाए हुनेछ कार्वाही – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsभारती र लक्ष्मणलाई गोर्खालीगको कठोर चेताउनी: पार्टीको नाम र झण्डा चलाए हुनेछ कार्वाही
दार्जीलङ,5नोभेम्बर।
स्व. मदन तामाङकी धर्मपत्नी भारती तामाङ अनि लक्ष्मण प्रधानले अबोप्रान्त गोर्खालीग पार्टीको झण्डा र पार्टीको नाम प्रयोग गरे गोर्खालीग पार्टीले उनीहरूले कानूनी कार्वाही गर्ने चेताउनी दिएको छ। आज गोर्खालीगको पोलिट व्यूरो कमिटीको एक सभा लाडेनला रोडस्थित पार्टी कार्यालयमा भएको थियो, जसमा पार्टी अध्यक्ष एसके प्रधान, महासचिव प्रताप खातीका साथै मोठ 10 जना सदस्य उपस्थित रहेको खातीले बताए।
उनले भने-गत केही दिनअघि भारती तामाङ र लक्ष्मण प्रधानले विभिन्न वक्तव्य दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरिरहेका छन्। गोर्खाल्यान्ड विरोधी राज्य सरकारले डाकेको बैठकमा भाग लिएर गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको विरोध गर्ने कार्य गरेको कारणनै पार्टीले भारती तामाङ, लक्ष्मण प्रधान साथै अन्यलाई पार्टीबाट हटाएको हो। यसैले उनीहरूले अबदेखि गोर्खालीग पार्टीको नाम र झण्डा आदि प्रयोग गर्न पाउँदैन। यदि आगामी दिनमा उनीहरूले पार्टीको नाम, झण्डा आदिको प्रयोग गरे उनीहरू विरूद्ध कानूनी कार्वाही गरिनेछ। किनभने, उनीहरूले पार्टी र पार्टीको संविधान विरोधी कार्य गरेका छन्। एक प्रश्‍नको उत्तरमा खातीले भने-राज्य सरकारले डाक्ने आगामी द्विपक्षीय वार्तामा बोलाउँदैन भन्ने डरलेनै भारती तामाङहरूले हत्तार-हत्तार पार्टीका महासचिव पद विप्लव राईलाई दिएका हुन्।
यसैबीच, उनले दार्जीलिङ पहाड़मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा कानून व्यवस्थाको धज्जिया उँड़ाएको आरोप लगाउँदै धेरै निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको बताए। उनले भने-एउटै कानून र आरोप लागेका विनय तामाङलाई राज्य सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिएर लालकोठीमा राख्ने काम गरेको छ, तर त्यहीं कानून र आरोप लागेका विमल गुरूङलाई पानी खेदो गरिरहेको छ। गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्न तयार बन्नेहरूलाई जीटीए-2-मा राखेर राज्य सरकारले जनभावनालाई कुल्चिने काम गरेको छ। यसपालीको आन्दोलनमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ जति दोषी छन्, उतिनै दोषी विनय तामाङ पनि छन्। तब एकजनालाई काख, अर्कोलाई पाखा किन काम भइरहेको छ। गोर्खा जातिलाई बंगालबाट छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्था दिनुपर्छ भनेर भारत स्वतन्त्र हुनअघिदेखि माग उठेको हो।
किनभने, बंगालमा गोर्खा जातिको यहाँको बहुसंख्यक जातिसित केही मिल्दैन। यसैले केन्द्र सरकारले गोर्खा समुदायको समस्या समाधान गर्न त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनैपर्छ अनि उक्त वार्तामा गोर्खाल्यान्डका पक्षधर सबै पार्टीहरूलाई बोलाउनुपर्ने पनि उनको माग छ। यसरीनै उनले गत केही दिनअघि पुलिस हिरासतमा रहेका कालेबुङका नगरपार्षद बरूण भुजेलको निधनमा न्यायिक जाँच हुनपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनले दार्जीलिङ पहाड़मा जाँच गर्नको लागि एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी) टोली आएको विषयलाई स्वागत जनाउँदै अब दूधको दूध, पानीको पानी हुनसक्ने आशा व्यक्त गरे। उनले भने-राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप हुँदानै एनआईएले जाँच गर्ने प्रावधान छ, यसैको जाँच गर्नको लागिनै दार्जीलिङ पहाड़मा एनआईए टोली आएको छ भन्ने सुनिन्दैछ। तर गोर्खाल्यान्डको माग उठाउनु राष्ट्र विरोधी होइन। यसैले एनआईएले निष्पक्ष भएर पहाड़मा भएका विभिन्न घट्नाहरूमाथि जाँच गर्नुपर्छ। यसैबीच, अर्को एक प्रश्‍न गर्दा उनले भने-विमल गुरूङ र रोशन गिरीहररूले गोर्खाल्यान्डको नाममा केवल मौज-मस्ती गरे अनि उनीहरूले कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सक्तैन। यसैबीच, गोर्खालीगले आज स्व. डम्बर सिंह गुरूङका पनाति अनुज गुरूङलाई आज पार्टीको युवा एकाई तरूँ गोर्खाका सांगठनिक सचिव बनाएको पनि खातीले जानकारी गराए भने आगामी बिहीबार स्व. डम्बर गुरूङकै कालेबुङस्थित घर कमल कुटिरमा एक सभा गर्ने कार्यक्रम बनाएको पनि बताए।
फोटो ः सभामा प्रताप खाती, एसके प्रधान र अन्य।